झलनाथ खनाल ‘केपी ओलीको भूमिका अब सिद्दियो’
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपाली राजनीतिमा अब केपी शर्मा ओलीको कुनै भूमिका नरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले एमसीसीका केही प्रावधानहरु सच्याएरमात्रै यसलाई अघि बढाउन सकिने धारणा राखेका छन् । प्रस्तुत छ नेता खनालसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? मेरो स्वास्थ्य अहिले निकै राम्रो भएको छ । अझै औषधी खाँदैछु । २/३ महिना रेस्टमा बस्नुपर्छ । त्यसपछि म अलि राम्रो हुन्छु । पहिलेको भन्दा निकै राम्रो भएको छु । तपाईंले अहिले राजनीतिक भेटवार्ता गर्न पाउनुहुन्न, देशको राजनीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अब म अहिले भिडभाडमा जानु हुँदैन । अहिले म जुमजस्ता माध्यमबाट अनलाइनबाट छलफल गरिरहेको छु । अनलाईन र फोनको माध्यमबाट मैले सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको छु ।
तपाईं भारतमा उपचार गर्न जाँदापनि त्यहाँबाट निकै चासोको रुपमा हेर्नुभयो, अहिले सत्तारुढ दल नेकपा ( एकीकृत समाजबादी) को वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । शेरबहादुर देउवाले अझै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुभएको छैन्, यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? पछिल्लो निर्वाचनमा नेकपाले प्राप्त गरेको दूई तिहाइको बहुमत पनि दुईवटा पार्टीले लिएको हो । त्यसैले यो गठबन्धन चाहीँ गर्ने, तर संस्कृति चाहीँ विकास नगर्ने । कुनै एउटा ब्यक्ति शक्तिमा पुग्यो भने सबै आफुले हालीमुहाली गर्ने, एक्लै मनपरीतन्त्र चलाउने यसले गर्दा समस्या देखिएको हो । अब अहिले हामीले फेरी गठबन्धन गरेका छौं, मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि पटक–पटक भनिरहेको छु । उहाँले चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुपर्छ ।